Soo dejisan GoldWave 6.47 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: GoldWave
Faallo ku saabsan GoldWave
GoldWave Xirfadaha la xiriira
Ficil! – Aalad lagu soo qabto fiidiyowga shaashadda kombuyutarkaaga. Software-ka wuxuu awood u siinayaa inuu ku baahiyo ficilada shaashadda ilaa adeegyada fiidiyowga caanka ah.
Software ayaa u heelan nidaam Linux qalliin ku flash ama drive adag. Software wuxuu taageeraa ugu ah qaybinta Linux, la nooc oo kala duwan oo ah nidaamka ka.